Umbuzo: Umele ntoni uCc kwiibhayisekile
Umthamo wenjini yesithuthuthu ulinganiswa ngokomthamo wetyhubhiki. Umthamo weCubic, okwaziwa ngokuba yi-“cc” yezithuthi, ukholisa ukuba phakathi kwe-50cc ukuya kwi-1500cc. Ikwanjalo
ULinyuswa njani iXabiso loMnini-sabelo kwiiBhayisikile zeMikes
Ukwandisa iXabiso loMnini-zabelo kufuneka: Unyuse iNzuzo; Nciphisa uTyalo-mali lwabaSebenzi; Nciphisa iTyala; kunye.Amaqhinga okunciphisa iindleko: Ukunciphisa uluhlu lwempahla.Nciphisa iNdleko eyiNkulumbuso yeMveliso yakho.Ukunciphisa inkcitho kwimveliso.Gxininisa kwi.
Umbuzo: Yintoni iBmx Bikes
Nangona babelana ngezinto ezininzi ezifanayo, iibhayisekile zabantwana zeentaba kunye neebhayisekile ze-BMX zahluke kakhulu. Iibhayisekile ze-BMX ziyilelwe abakhweli abakumaqhinga, imitsi, imitsi, ezidolophini
Apho Niza Kunikela NgeeBhayisekile Kufuphi Nam
Nikela ngeBhayisekile yakho endala kwiNqanaba elungileyo Unokukwazi ukunikela ngayo kwivenkile enkulu yesisa, kodwa nceda ubabuze ukuba bayakwazi na ukuyamkela.
Impendulo eKhawulezayo: Zihamba njani iiBhayikhi zoMbane ngokukhawuleza
Ingaba ibhayisekile yombane ingahamba ngokukhawuleza kangakanani? Ukuba uyanyovwa, unokuhamba ngokukhawuleza njengoko ukwazi ukuyinyothula. Nangona kunjalo, iibhayisekile ezininzi ziyayeka ukunika uncedo lombane
Indlela yokususa umhlwa kwiiBhayisekile
Indlela yokususa umhlwa kwibhayisekile! Xuba isoda yokubhaka kunye neviniga kwintlama uze ugalele ijusi yekalika encinci. Ukusebenzisa ibrashi, sebenzisa intlama kuzo zonke
ezaposwa ngomhla Julayi 12, 2014 Septemba 15, 2021 By danna akukho Izimvo kwisigcina-ntloko sebhayisekile: ukhetho, ubungakanani, ukubaluleka
egqithileyo 1 ... 26,497 26,498
Umbuzo: Ngaba uMjikelo omnye weTestosterone uyakukulimaza
Ngaba uMjikelo omnye weSteroids uza kukwenzakalisa
Ingaba Imilenze Yam Izakuba Mikhulu KwiBhayisekile
Ngaba iFitbit yam iTraca ukuHamba ngeBhayisikile